Kedu otu ị ga-esi rite uru site na ntinye akwụkwọ ndebanye ederede azụlink?
Isiokwu a ga-aba uru maka ndị na-achọ akwụkwọ ndekọ na ebe ha ga-edozi blog ha. M na-akwadebere gị otu ndepụta nke saịtị, nke nwere ike ịba uru maka mgbasa ozi ụlọ njikọ gị. Ya mere, ọ bụrụ na i debeghị isi gị nye akwụkwọ ndekọ ndị a, ịkwesịrị imezi ọnọdụ a ma mepụta otu. Ka anyị lebakwuo anya n'akwụkwọ ndekọ ndị a.
Ebee ka edoro blog gị?
Achọrọ m ịmalite listi a na ngwá ọrụ Webmaster dị ka ọ bụ ụzọ zuru oke iji nweta saịtị gị na engines ọchụchọ. Site n'enyefee blog ma ọ bụ weebụsaịtị gị, ị na-ekwe ka bọtịnụ ọchụchọ chọọ idenye aha gị ma nye gị ọkwa dị elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ - refaire resistance kanger pro tank coils. Ọ bụ ezie na e nwere akwụkwọ ndekọ ụfọdụ nke bara ezigbo uru, ị nwekwara ike itinye njikọ gị n'ebe ahụ iji chọpụta ihe.
Ngwá Ọrụ Webmaster Web
Ejiri ngwá ọrụ a mee ka ihe dị mfe maka webmasters na ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ. Ị nwere ike ọ bụghị naanị ịgbakwunye gị na ebe nrụọrụ weebụ na Google usoro ma nyefee gị mapmapu ya. Site n'ime otú ahụ, ị ​​ga-ahụ na bọtịnụ Google nwere ike ịkwanye njikọ gị na saịtị ma depụta ha, na-enye saịtị gị ọkwa dị elu. Otu uru nke ngwá ọrụ a bụ na ọ nwere ike ịbụ n'efu SEO ngwá ọrụ maka ebe nrụọrụ weebụ gị.
Ọ bụrụ na ị mepụta mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ị ga-enwe ike inweta ọtụtụ okporo ụzọ bara uru na ngalaba gị. site n'usoro mgbasa ozi mgbasaozi a. Iji nyefee saịtị gị na Facebook, ịkwesịrị ịmepụta akaụntụ azụmahịa gị ebe a. E nwere ọtụtụ ohere maka ụlọ ọrụ na Facebook, dịka pikselụ, mgbasa ozi, na ihe ndị ọzọ.
Ọtụtụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-elelị uru nke Google platform. Otú ọ dị, ị na-edo onwe ya n'okpuru ya, ị ga-ahụwanye na Google ma malite ịnweta okporo ụzọ ezubere iche maka mpaghara gị.
Google Analytics abụghị ihe nkịtị iji nyefee saịtị gị ma ọ bụ blog. Otú ọ dị, ị nweghị ike ịdị na-enweghị ngwá ọrụ a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite gị akara n'ịntanetị. Ọ na-enyere aka ịdekọ ndekọ ọnụ ọgụgụ gị ma nye gị niile metrics dị mkpa ị ga - achọ iji mee ka ihe ịga nke ọma SEO gị. Nke kachasị mma bụ na ngwá ọrụ n'efu nke dị maka ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ n'ụwa nile.
Pinterest bụ ihe ntanetị mgbasa ozi na-ewu ewu nke dabeere na ọdịnaya ọdịnaya. Mgbe ị nyefere blog gị na Pinterest ma nyochaa profaịlụ gị, ị na-enweta nkwado ndabere, dị mma ma dị elu, nke dị na ọnọdụ ị na-enye ndị ọrụ na infographics. Ọzọkwa, akwụkwọ ndekọ backlink a ga-enyere gị aka imeziwanye àgwà gị ma na-adọta ndị ahịa nwere ike ịbịanye akara gị.
Nke a backlink ndekọ bara uru maka ngalaba ochie ochie nke nwere ikike ụfọdụ maka ndị ọrụ. Ọ bụ ụzọ dị irè bara uru na nke bara uru dịka ọ nwere ike imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị.